चेकलिस्ट: सामग्री समावेश कसरी गर्ने Martech Zone
जब मार्केटरहरूले श्रोताहरू संलग्न गर्ने सामग्रीमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, हामी प्रायः आफूलाई आफैंले समान व्यक्तिको सानो समूहसँग अभियानहरू डिजाईन गर्ने र डिजाईन गर्ने फेला पार्दछौं। जब बजारहरू निजीकरण र सगाईको लागि प्रयास गर्दै छन्, हाम्रो सन्देशको विविधतामा धेरै अक्सर उपेक्षा गरिन्छ। र, संस्कृतिहरू, लिंग, यौन प्राथमिकताहरू, र अक्षमता ... हेराई गरेर हाम्रो सन्देशहरू संलग्न वास्तवमा गर्न सक्नुहुन्छ सीमान्तकृत जो हामी जस्तो छैनन्।
समावेशीता प्रत्येक मार्केटिंग सन्देशमा प्राथमिकता हुनुपर्दछ। दुर्भाग्यवश, मिडिया उद्योग अझै चिन्ह हराइरहेको छ:
महिला जनसंख्याको %१% हो तर प्रसारण लीडको केवल %०%।
बहुसांस्कृतिक मानिसहरु 39%% जनसंख्या छन् तर प्रसारण लीडको मात्र २२%।
१ %--20 उमेरका अमेरिकाहरूको २०% ले LBGTQ को रूपमा पहिचान गर्दछ तर prime% मात्र प्राइमटाइम रेगुलरहरू बनाउँछ।
१ Americans% अमेरिकीहरूसँग असक्षमताहरू छन् तर प्राइमटाइम नियमितहरू मात्र २% असक्षमता छ।
समावेशीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरेर, मिडियाले रूढीवादी रूढीहरूलाई रोक्न र बेहोस पूर्वाग्रह कम गर्न मद्दत गर्दछ।
समानता - निष्पक्षता बढाउनको लागि लक्षित तर यो कार्य मात्र गर्न सक्दछ यदि सबैजना उहि स्थानबाट सुरू हुन्छ र उही समान मद्दत चाहिन्छ।
इक्विटी - सबैलाई दिँदै छ उनीहरूलाई सफल हुन के चाहिन्छ जबकि समानताले सबैलाई समान व्यवहार गर्दैछ।
प्रतिच्छेदन - जातीय, वर्ग, र लि as्ग जस्ता सामाजिक वर्गीकरणको एक अर्कोसँग जोडिएको प्रकृति जुन उनीहरूले निर्दिष्ट व्यक्ति वा समूहमा लागू गर्दछ, ओभरल्यापिंग र भेदभाव वा असमानताको परस्पर निर्भर प्रणालीको रूपमा लिइन्छ।
टोकनवाद - प्रस्तुत गरीएको मानिसलाई समावेशी हुन केवल एउटा प्रतीकात्मक प्रयास गर्ने अभ्यास, विशेष गरी समानताको उपस्थितिलाई छेड्ने क्रममा निम्न प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको सानो संख्यामा भर्ती गरेर।
बेहोस पूर्वाग्रह - मनोवृत्ति वा स्टिरियोटाइपहरू जसले हाम्रो समझ, कार्यहरू, र अचेतन तरीकाले निर्णयहरूलाई असर गर्दछ।
यो यूट्यूबबाट इन्फोग्राफिक एक विस्तृत चेकलिस्ट प्रदान गर्दछ जुन तपाईं कुनै पनि सृजनात्मक टीमसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नको लागि योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, र तपाईंले सिर्जना गरिरहनु भएको सामग्रीको लक्षित दर्शकहरूमा एक ड्राइभर हो। यहाँ चेकलिस्टको रन-डाउन छ ... जुन मैले कुनै सामग्रीको लागि कुनै संगठनको लागि प्रयोग गर्न परिमार्जन गरेको छु ... मात्र भिडियो होइन:
सामग्री: कुन शीर्षकहरू कभर गरिएको छ र कुन परिप्रेक्ष्यमा समावेश गरिएको छ?
मेरो हालको सामग्री प्रोजेक्टहरूको लागि, के तपाईंले सक्रिय रूपले विविध दृष्टिकोणहरू खोज्नु भएको छ, विशेष गरी ती जुन तपाईंको आफ्नै भन्दा फरक छ?
के तपाईंको सामग्रीले सीमान्तकृत समूहहरूको बारेमा स्टिरियोटाइपहरूलाई सम्बोधन गर्न वा डेबunk गर्न काम गर्दछ र श्रोताहरूलाई अरूलाई जटिलता र समानुभूतिका साथ हेर्न मद्दत गर्दछ?
के तपाईंको सामग्री (विशेष गरी समाचार, इतिहास, र विज्ञान सम्बन्धित) बहु दृष्टिकोण र संस्कृतिहरूलाई आवाज दिन्छ?
अनस्क्रीन: जब मानिसहरू मसँग भेट गर्छन् तिनीहरू के देख्छन्?
के मेरो सामग्रीमा विविधता छ? के विशेषज्ञहरु र चिन्तन बिभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरु को परिचय को बहु आयाम (लिंग, जाति, जाति, क्षमता, आदि) को साथ मेरो सामग्री मा चित्रित छ?
मेरो सामग्रीको अन्तिम १० टुक्रा बीच, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरिएका आवाजहरूमा भिन्नता छ?
यदि म एनिमेसन वा चित्रहरु प्रयोग गर्दछु, के त्यसले विभिन्न छालाको टोन, कपालको बनावट, र लिंग प्रदान गर्दछ?
के त्यहाँ आवाजहरु को बीच विविधता छ कि मेरो सामग्री को बयान?
संलग्नता: म कसरी अन्य सर्जकहरू संलग्न र समर्थन गर्दछु?
सहयोग र नयाँ परियोजनाहरूका लागि, म विभिन्न क्यारियर चरणहरूमा उम्मेदवारहरूको एक बिभिन्न पाइपलाइन हेर्दै छु, र के अन्तर्निहिततालाई ध्यानमा राखिएको छ?
के म निम्न प्लेटफर्मबाट रचनाकारहरूलाई माथि उठाउन र समर्थन गर्नको लागि मेरो प्लेटफर्म लीवरेज गर्न अवसरहरू लिन्छु?
के म विविध समुदाय / सामग्री संलग्न गरेर आफूलाई सीमान्त दृष्टिकोणको बारेमा शिक्षा दिदैछु?
मेरो संगठनले कसरी बिभिन्न आवाज खेती गर्न र आउँदो पुस्ताका सञ्चारकर्ताहरू / प्रभावकारिताहरूलाई सशक्त पार्न काम गरिरहेको छ?
मेरो संगठन कसरी टोकनवादबाट बच्दछ? के हामी विशेषज्ञहरू र कम्युनिकेटरहरूलाई अवसर-प्रतिनिधित्व पृष्ठभूमिबाट संलग्न गर्दछौं जुन विविधता-सम्बन्धित सामग्री भन्दा टाढा विस्तार हुन्छ?
कसरी बजेट र लगानी विविधता र समावेशीकरण प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्छन्?
दर्शक: सामग्री बनाउँदा म कसरी दर्शकहरूको बारेमा सोच्दछु?
अभिभावक को हो? मैले विस्तृत रूपमा विविध श्रोतालाई खोज्न र व्यस्त राख्नको लागि मैले मेरो सामग्री निर्माण गर्नेबारे सोचेको छु?
यदि मेरो सामग्रीमा विषयवस्तु समावेश छ जुन सांस्कृतिक हिसाबले केहि समूहहरूमा पक्षपातपूर्ण छ भने के म त्यस्तो प्रस providing्ग प्रदान गर्दै छु जुन विविध दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न सकिन्छ?
प्रयोगकर्ता अनुसन्धान गर्ने क्रममा, के मेरो संस्थाले विभिन्न दृष्टिकोण खोज्न र समावेश गरिएको सुनिश्चित गर्दछ?
सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू: मेरो टीममा को छ?
के त्यहाँ मेरो सामग्रीमा काम गर्ने टिमहरुमा विविधता छ?
के मेरो टीमको डेमोग्राफिक्सले सामान्य जनसंख्या झल्काउँदछ, केवल हालको दर्शकलाई मात्र होइन?
के म परियोजनाहरु मा परामर्शदाता को रूप मा पहिचान को बहु आयाम (लिंग, जाति वा जाति, क्षमता, आदि) को साथ विविध पृष्ठभूमि बाट विशेषज्ञहरु र विचार नेताहरु संलग्न गर्दैछु?
टैग: विविधताविविधता तथ्या .्कसमानताइक्विटीसमावेशसमावेशीतासमावेशी तथ्या .्कइंफोग्राफ़कप्रतिच्छेदनस्टीरियोटाइपहरूटोकनवादबेहोस पूर्वाग्रह
ब्लगिंगको साथ शीर्ष कानूनी मुद्दाहरू